‎Thiha Lu Lin's Travel & Lifestyle Podcast i Apple Podcasts
This Podcast is hosted by Myanmar Blogger/Vlogger Thiha Lu Lin also known as Thiha, the Traveller. And it is about travel experiences, lifestyle and much more. Thiha Lu Lin isaBurmese travel blogger, writer and radio dj. He started his blogging from 2002 and wrote short stories, articles, reviews and indexing articles on local daily newspaper, monthly magazines, weekly journals and in his own website. Thiha has been featured in the list of “Top 10 Travel Bloggers” on The Myanmar Times in 2018 and also ranked sixth on The Myanmar Times “Top 10: Bloggers” list in 2019. Also, he has been featured in the list of “7 Must Follow Travel Bloggers” on We Media in 2018. He wasaradio dj for City FM and Shwe FM for over6years.
Thiha Lu Lin's Travel & Lifestyle Podcast Thiha Lu Lin
မင်္ဂလာပါ...ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေး Episode (21) မှာတော့ "ခရီးသွားရင် လိုအပ်သလို အသုံးချနိုင်မဲ့ Essential Oils ဆိုတာ ဘာလဲ" ဆိုတဲ့ စကားဝိုင်းလေး တင်ဆက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ပညာမှ သုံးစားမရတာ မရှိပါဘူး။ သိထားရင် အသုံးဝင်တာချည်းပါပဲ။ အခုလည်း ကျွန်တော် ခရီးသွားရင်း ရောက်တဲ့ဒေသတွေက အလေ့ကျဖြစ်ဖြစ် စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ဖြစ် ပေါက်ရောက်တဲ့ အပင်၊ အသီး၊ အပွင့်တွေကနေ အသားအရေနဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ Essential Oil ကို ထုတ်ယူလို့ရပြီး လိုအပ်သလို အလှအပအတွက်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ဖြစ်စေ အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။တလောက ကိုဗစ်ကပ်ကြီးကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေ ရောင်းချမရဘူး၊ ပစ်လိုက်ရတယ်၊ အလကားဝေလိုက်ရတယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးအခက်ကြုံကြရတယ်။ တကယ်တော့ တချို့သီးနှံတွေနဲ့ ပန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့မှာ နည်းပညာ ပေးမဲ့သူ သေချာမရှိလို့ ဆုံးရှုံးလိုက်ကြရတာတွေပါ။ သမာရိုးကျ စိုက်ပြီး အစာအဖြစ်ပဲ ရောင်းချနေတဲ့အပြင်ကိုမှ တဆင့်တက်လှမ်းလို့ အစာအဖြစ် မရောင်းချနိုင်ရင် နောက်တစ်မျိုး ဘယ်လို ဖန်တီးကြမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားရတော့မဲ့ အချိန်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် မြင်တွေ့နေရတဲ့ အပင် အရွက် အသီး အပွင့် အမျိုးမျိုးကနေ Essential Oil ဆိုတဲ့ အသားအရေအတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်မဲ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ သဘာဝအဆီအမျိုးမျိုးကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အရေးကြီးသလဲ၊ ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Flawless Myanmar ရဲ့ Founder ဖြစ်တဲ့ မလွင်မာအောင် နဲ့ ခရီးသွားရင်းပြောဆိုထားသမျှကို တင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါလေးကြည့်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခု စဖို့ စိတ်ကူး
020 :: [Lifestyle] Tips for Keeping Good Oral Hygiene While Travelling with Guest Dr. Hsu Yee Aung Soe
မင်္ဂလာပါဗျ...ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေး Episode (20) မှာတော့ "ခရီးသွားခြင်းနဲ့ သွားကျန်းမာရေး" စကားဝိုင်းလေး တင်ဆက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော့်ရဲ့ သွားနဲ့ခံတွင်း စစ်ဆေးတာကို ရန်ကုန်၊ ပုလဲကွန်ဒို က DSC Dental Specialist Clinic မှာ လုပ်ဖြစ်ရင်းကနေ သဘောကျလို့ အဲ့ဒီက ဒေါက်တာ ဆုရည်အောင်စိုး နဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီ Podcast မှာ ဘာတွေ ပြောဖြစ်သလဲဆိုရင် -ဘာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ သွားကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတာ လုပ်သင့်သလဲ?ခရီးသွားရင် ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနဲ့ အဝေးပြေးကားတွေက ပေးတဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သွားပွတ်တံတွေက သုံးစွဲဖို့ သင့်ရဲ့လား?ခံတွင်းနံ့ပျောက်ဆေး နဲ့ ပီကေ တွေ သုံးတာရော တကယ်အကျိုးဖြစ်ရဲ့လား?မနက်စာ မစားခင် သွားတိုက်ရမှာလား၊ စားပြီးမှ တိုက်သင့်တာလား?ခရီးသွားနေသူတွေအတွက် သွားနဲ့ခံတွင်း ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲ?ဆိုတာတွေ ကို စကားပြောဆိုထားပါတယ်။ခရီးသွားဝါသနာပါသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေချည်းပဲမို့ သေချာလေး နားထောင်ဖြစ်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
019 :: [Travel] Save Bagan From Treasure Stolen with Guest U Than Htay
မင်္ဂလာပါဗျ...ဒီနေ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေးမှာတော့ ပုဂံ မှာ ခုလတ်တလော ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ စေတီတွေရဲ့ ကွမ်းတောင် တွေကို ဖောက်ပြီး ဌာပနာတွေ ခိုးယူခံရတာရယ်၊ လောကထိပ်ပန်ဘုရား ရှေ့က အကာအရံ ကန့်လန်ကာကို မီးရှို့ခံရတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပုဂံညောင်ဦး ဧည့်လမ်းညွှန်များအသင်း ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေး နဲ့ စကားပြောဖြစ်သမျှကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးသန်းဌေး နဲ့ စကားပြောကြည့်ရင်း -ဘာကြောင့် ဒီလို ဖောက်ထွင်းမှုဖြစ်သလဲဘာကြောင့် မီးလောင်မှု တပြိုက်နက်တည်း ဖြစ်လာသလဲ၊ ဆက်စပ်မှုရှိနေမလားအရေးယူမှုတွေ တကယ်လုပ်ဆောင်နေရဲ့လားပုဂံဘုရားတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဘယ်သူတွေက လုပ်ဆောင်နေကြသလဲပုဂံ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည် မလာရင် ဘယ်လိုရပ်တည်နေထိုင်ကြမလဲပြည်တွင်းခရီးသွားဧည့်သည်တွေ၊ ဘုရားဖူးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ စည်းကမ်းမဲ့မှုတွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲပုဂံဧည့်လမ်းညွှန် အခမဲ့သင်တန်းစတဲ့ စတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပုဂံကိုချစ်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ စကားတွေ အများကြီး ပြောဖြစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
018 :: [Lifestyle] Life of Veganism with Guest Kyaw Zin Min
ဟဲလို... ကျွန်တော့် Podcast ရဲ့ ဒီနေ့ Episode မှာတော့ Vegan နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ တင်ဆက်ထားပါတယ်ဗျ... အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သားသတ်လွတ် (သက်သတ်လွတ်) စားတဲ့သူတွေ ကမ္ဘာမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သက်သတ်လွတ်စားတဲ့သူတွေမှာလည်း ပုံစံကွဲတွေ အများကြီးရှိကြောင်း သိသူ နည်းပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် -(၁) Lacto-Ovo Vegetarians (အသားရှောင်၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ဥအမျိုးမျိုး စားသုံးသူများ)(၂) Lacto Vegetarians (အသား နဲ့ ဥအမျိုးမျိုးရှောင်၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်း စားသုံးသူများ)(၃) Ovo Vegetarians (အသား၊နို့ ရှောင်ပြီး ဥအမျိုးမျိုးသာစားသုံးသူများ)(၄) Vegans (သတ္တဝါမှ ထွက်သမျှ အကုန်ရှောင်ကြဉ်ကြသူများ)ဆိုပြီး ကွဲပြားပါသေးတယ်။ Vegan မှာကိုပဲ Type က ၂ မျိုးလောက်ရှိပါသေးတယ်။သက်သတ်လွတ် စားခြင်းကို ကမ္ဘာမှာ ခရစ်တော်မပေါ်မီ BC 700 လောက်ကတည်းက စတင်ခဲ့ပြီလို့ ပြောဆိုကြပြီး Vegan ကိုတော့ ခုဒီဘက်ခေတ်ကြမှ ရှေ့က သက်သတ်လွတ်စားတဲ့ ပုံစံတွေကနေ ကွဲထွက်လုပ်ဆောင်လာကြတယ်လို့ ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့် Veganism တွေ ဖြစ်လာကြသလဲ?Veganism တစ်ယောက် ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်လဲ?ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုပုံစံဖြေရှင်းလဲ?Veganism ဆိုတာ ဝိတ်ကျစေတဲ့ ဝိတ်ချနည်းတစ်ခုလား?ဘာတွေ ကောင်းကျိုးပေးနိုင်လဲ?Vegan ဖြစ်ဖို့ လွယ်သလား?စတဲ့ စတဲ့ Veganism တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာတွေကို အခုဆိုရင် ၃ နှစ်တာ Veganism အဖြစ် ပြောင်းလဲ နေထိုင်နေတဲ့ အဆိုတော် ကျော်ဇင်မင်း နဲ့ စကားပြောဖြစ်သမျှကို တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
017 :: [Travel] Myanmar Tourism After Covid-19 Talkshow
ဒီနေ့အတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast Episode (17) မှာတော့ ကိုဗစ်ကာလအလွန် မြန်မာ့ခရီးသွားစကားဝိုင်းလေးကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာတွေကြုံလာနိုင်သလဲ၊ ဘာတွေပြင်ဆင်ကြမလဲ...New Normal နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဆိုတာကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီစကားဝိုင်းမှာ ဗိသုကာနဲ့ ဟိုတယ်အကြံပေး ကိုဇော်လင်းမြတ် နဲ့ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင် ကိုကောင်းမင်းခန့် တို့နဲ့ စကားပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစကားဝိုင်းကနေ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်ဖြစ်စေ ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့ နိုင်ငံသားတိုင်း အကျိုးရှိဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |
016 :: [Lifestyle]5Ways to Turn Your Crush Into Your Bae
ကျွန်တော့်ရဲ့ Podcast လေး ဒီတစ်ခုဆို Episode (16) ရောက်လာပါပြီ... ဆက်ပြီး နားဆင်ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးပါ။ဒီ Episode မှာတော့ အချစ်အကြောင်းလေးတွေ ပြောထားတယ်။"5 Ways to Turn Your Crush into Your Bae" ဆိုပြီး ကိုယ်လိုက်နေတဲ့ တစ်ယောက် ကိုယ့်ချစ်သူ ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေ အဓိက အရေးတကြီး သိထားရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကို ပြောထားပါတယ်။ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အေးအေးဆေးဆေး နားဆင်နိုင်ပါတယ်ဗျား။| Website: https://www.thihathetraveller.com || Facebook: https://www.facebook.com/travellerthiha || Instagram: https://www.instagram.com/thihalulin || YouTube: https://www.youtube.com/thihalulin || Email me @ thihalulin@gmail.com |